Dheefta Ilkaha Carewell - Carewell SEIU 503
Kalsooni ku dhoola cadey!
Dheefta Ilkaha ee Carewell SEIU 503 waxay bixisaa ceymis kaas oo bixiya adeegyada ilakaha ee aasaasiga ah oo bilaash kuu ah wuxuu sidoo kalana bixiyaa qayb ka mid ah adeegyada kale ilkaha ee adag.
Dheefta Ilkaha ee Carewell SEIU 503 waxaa ceymiyo Kaiser Permanente.
Kharashyada Khidmada Adeegga Ceymiska ee Xubinta
Baaritaannada afka, raajooyinka, nadiifinta ilkaha, buuxinta joogtada ah, soo saarista fudud $0
Daweeynta xidid dilidda, qalliinka soo saaridda iliga 10% lacagaha haraaga lacag jarista kadib
Lafaha iliga laga dul galiyo, lafaha ilkaha xiriiriya, ilkaha macmalka ah, bir gelinta iliga 30% lacagaha haraaga lacag jarista kadib
Wixii faahfaahin dheeraad ah ee ku saabsan waxa lagu dabaro ceymiskaaga ilkaha 2022 ee Kaiser, eeg soo koobida dheefaha ilkaha:
Soo Koobida Dheefaha Ilkaha ee Aagga Kaiser Dhexdeeda ee 2021 (qorshaha HMO)
Soo Koobida Dheefaha Ilkaha ee Aagga Kaiser Ka Baxsan ee 2021 (qorshaha PPO): haddii aadan ag dagnayn goob Kaiser, waa inaad booqato dhakhtar ilko oo ku jira liiska Kaiser ee adeeg bixiyeyaasha la doorbido.
CUSUB! Carewell SEIU 503 waxay hadda bixisaa magdhawyada khrashyada jaabka laga bixiyo (haraaga lacag jarista ka dib iyo khidmada adeegga ceymiska) ee adeegyada lagu dabaro ceymiskaaga ilkaha ee Kaiser Permanente ee 2021-2021.
Guji halkaan si aad u hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan barnaamijka magdhawga lacagaha qofka uu jaabkiisa ka bixiyo ee Ilkaha
Dabaridan waxaa loogu talagalay kaliya ceymiska ilkaha, ma ahan ceymiska caafimaadka.
Marka aad xaq u yeelato, waxaad ceymis ku heli doontaa ceymiska ilkaha ee Kaiser Permanente. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay waa inaad ka cusbooneysiiso Xafiiska Maamulka Dheefaha iyo Gobolka magacaaga, jinsigaaga, Lambarkaaga Soshiyaal Sekuyuritiga iyo ciwaankaaga hadda.
Dheefta Ilkaha ee Carewell SEIU 503 waa khidmo la’aan — ma jirto wax biil bille ah oo aad bixin doonto.
Ma isticmaali kartid Kaarka Dukaameysiga ee Dheefta si aad ugu bixiso kharash kasta oo la xidhiidha ceymiskaaga ilkaha.
Hubi Xaq U Yeelashadaada Dheefaha Ilkaha
Waa inaad ka shaqeyso 40 saacadood ama ka badan bishiiba saacadaha shaqada xaqa leh — sidoo kale loo yaqaano saacadaha kooxda gorgortanka — labo bilood oo xiriir ah. Ka dibna waxaa jirta hal bil oo muddo sugitaan ah inta saacadahaaga loo gudbinayo Xafiiska Maamulka Dheefaha.
Tiradasaacadahashaqada shaqada xaqa leh ee aad u baahan tahay si aad xaq ugu yeelato dheefaha Carewell waa saacadaha shaqada ee ay bixiyaan Acumen, DHS ityo/ama PPL iyada oo matalayo macmiilkaaga.
Dheefaha Ilkaha, Arragga + Maqal, iyo Barnaamijka Caawimaadda Shaqaalaha waxaa loogu samayn doonaa otomaatik ah adiga aad:
ka cusboonaysiiso Xafiiska Maamulka Dheefaha iyo Gobolka magacaaga, jinsigaaga, Lambarkaaga Soshiyaal Sekuyuritiga, iyo ciwaankaaga hadda.
Haddi ceymiska caafimaadkaaga lagu bixiyo Kaiser
Ma heli doontid kaarka ilkaha Kaiser Permanente oo gaar ah haddii aad ku nooshahay aagga shaqada ee Kaiser oo haddadan aad leedahay ceymiska caafimaadka ee Kaiser Permanente. Waxaad u heli doontaa hal kaar ceymiska caafimaadka iyo ilkaha labaduba.
Agga adeegga Kaiser dhexdiisa (HMO plan)
Haddi ceymiskaga caafimaadka aan lagaa siinin Kaiser
Waxaad ku heli doontaa kaarka ilkaha ee Kaiser Permanente boostada haddii aadan haysanin ceymiska caafimaadka ee Kaiser Ogsoonoow kaarkan waxaa loogu talagalay oo kaliya ceymiska ilkaha loogumana talagalin dheef kale.
Ka baxsan Agga adeegga Kaiser (PPO plan)
Haddii aad qabtid wax su’aalo ah oo ku saabsan dheefahaaga ilkaha, waxaad ka waci kartaa Adeegyada Xubnaha ee Kaiser Permanente lambarka 1-800-813-2000.
CUSUB! Waxaad hadda fursad u haysataa in macluumaadka dheefta ilkaha ee gaarka ah laguugu soo diro fariinta qoraalka ah. Halkan guji si aad u hesho faahfaahin.
Hubso inaad xaqiijiso in adeeg bixiyahaaga uu la shaqeeyo shirkadda ka hor inta aadan adeeg ka raadsanin oo si taxadar leh dib u eeg dukumiintiga soo koobida dheefta si aad u hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan kharashyada jaabka laga bixiyo ee suuragalka ah sida haraaga lacag jarista ka dib iyo khidmada adeegga ceymiska. Carewell SEIU 503 kuuma magdhaweyso kharashyada dheeraadka ah umana isticmaali kartid Kaarka Dukaameysiga ee Dheefta kharashyada ilkaha, marka ka ogoow adeeg bixiyahaaga habraacyada aan si buuxdo loo dhameystirin.
Raadi dhakhtarka ilkaha
Agga adeegga Kaiser dhexdiisa
Si aad dhakhtarka ilkaha uga hesho aagga adeegga ee Kaiser booqo websaydhka Kaiser Permanente kaiserpermanentedentalnw.org/choose/by-area/ ama wac 1-800-813-2000.
Ka baxsan Agga adeegga Kaiser
Si aad u hesho dhakhtarka ilkaha ee ka qayqaato, tag kaiserpermanentedentalnw.org/choose/search-dental-choice-ppo-network/ ama wac 1-800-813-2000.
‎‏Uma baahnid inaad dib u codsatid ama dib iskuugu diiwaangelisid — ilaa iyo inta aadan ahaanaynin shaqo la’aan laba bilood oo isku xigta (ama aadan yeelanaynin saacado shaqo oo eber ah) waxaad xaq u sii lahaan doontaa dheefaha Ilkaha, Aragga + Maqalka, iyo Barnaamijka Caawimaadda Shaqaalaha. Ma heli doontid kaar cusub sanad walba.
Haddii ay ku moodo laba bilood oo xidhiidh ah adiga oo aan shaqayn saacado shaqo oo xaq leh (ama haddii soo sheego saacadaha shaqada oo eber ah), ka dib muddo kordhin hal bil ah uma xaq uma sii lahaan doontid dheefaha Ilkaha, Aragga + Maqalka, iyo Barnaamijka Caawimaadda Shaqaalaha.
Guudmarka dheefaha Ilkaha ee Kaiser (HMO)
Soo Koobida Dheefaha Aagga Kaiser Dhexdeeda ee 2022 (HMO)
Guudmarka Kaiser Dental Choice (PPO)
Soo Koobida Dheefaha Aagga Kaiser Ka Baxsan ee 2022 (PPO)
Guji halkaan si aad u eegto dhammaan Khayraadka Ilkaha
Xafiiska Maamulka Dheefaha
Su’aalaha ku saabsan xaq u yeeleshada dheeftan
Waxaad heli wayday kaarkaaga ilkaha
Kaiser ayaa kaa wayday nidaamkeeda
Si aad u ogaato haddii aad ku jirto ama aad ka baxsan tahay aagga adeegga ee Kaiser
Adeegga Macaamiisha ee Kaiser Permanente Dental
Sababaha loola xiriiro Adeegga Macaamiisha ee Kaiser Permanente Dental
Su’aalaha ku saabsan dhakhtarka ilkaha ee aad tagi karto
Su’aalaha ku saabsan kharashyada adeegyada ilkaha
Waxaad u baahan tahay kaarka ilkaha oo cusub
Qabso ballanta ilkaha
Akhri su’aalaha inta badan la isweydiiyo ee ku saabsan dheefta Ilkaha ee Carewell Arag Su’aalaha Badanaa La Isweydiiyo wixii macluumaad dheeraad ah.
Miyaan haystaa ikhtiyaaro aan ahayn Kaiser Permanente Dental?
Carewell SEIU 503 kuma bixiso ikhtiyaaro kale caymiskaaga ilkaha. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad degan tahay meel ka baxsan Aagga Adeegga Kaiser, waxaa lagugu qori doonaa Qorshaha Xullashada Ilkaha ee Kaiser Permanente. Sida ku cad xullashada Ilkaha PPO ee KP waxaad awoodi doontaa inaad booqato dhakhtar ilkeed oo ruqsad haysta. Si kastaba ha ahaatee, waxaad bixin doontaa wax yar haddii aad booqato dhakhtarka ilkaha ee ka qaybqaata shabakada Kaiser’s PPO. Si aad u xaqiijiso inaad degan tahay gudaha ama ka baxsan Aagga Adeegga Kaiser, kala xiriir Xafiiska Maamulka Dheefaha 1-844-507-7554, ikhtiyaar 3 ka dib ikhtiyaar 2.
Waxaan horey u lahaa qorshe ilkeed. Laba ma heli karaa?
Wixii su’aalo ah ee khuseeya iskuduwidda dheefaha, fadlan la xiriir Adeegga Macmiilka ee Kaiser Permanente.
Waxaan horay u lahaa dhakhtarka ilkaha kaas oo aan jeclahay. Miyaan sii wadi karaa inaan utago dhakhtarkan ilkaha?
Haddii aad degan tahay meel ka baxsan aagga adeegga Kaiser oo aad leedahay bixiye gaar ah oo aan ku jirin shabakadda, waxaad waydiin kartaa dhakhtarkaaga ilkaha haddii ay rajaynayaan in lagu aqoonsado Kaiser Permanente si ay qayb uga noqdaan shabakadda.
Haddii aad deggan tahay gudaha aagga adeegga Kaiser ma heli doontid caymis kasta oo uu sameeyo dhakhtarka ilkaha ee ka baxsan shabakadda.